ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ခေါင်းရှောင် တတ်သလား”
ကိုရွှေအောင်ရေ…. မှန်ပါပေတယ်။ ခေါင်းရှောင်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ပခုံးပေါ်ကို ကျရောက်လာတဲ့တာဝန်ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တာဝန်မယူရဲရာက အခြေခံပါတယ်။ ခေါင်းရှောင်တတ်တဲ့သူဟာ လူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကိုရဖို့၊ ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်ဖို့ အင်မတန် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးပါတယ်။
ထိုင်ဝန်ကြီးချုပ်က တရုတ် ထိုင်း ကပြားဆိုဗျ...
ဘုရ်ှကတော့အရှောင်အတိမ်း ဂျက်စီဂျိမ်း အလားပဲ။
သူ့ မျက်နှာကြီးကို အီရတ်ဖိနပ်နှစ်ရံ တည့်တည့်ကြီးထိလို့ ကတော့ အမေရိကန် လူမျိုး နဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံး သိက္ခာကျရမယ့်အဖြစ်ဆိုးပဲ။ ဒီခေါင်းရှောင်ကောင်းတာကတော့အင်မတန်လိမ္မာပါးနပ် လှတဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ခံအား၊ ဒေါသထွက်စရာအဖြစ်အပျက်ကို ရယ်မောစရာလုပ်ပစ်ပြီးပွဲထိန်းသွား နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။ ဘုရှ် ဟာ ဒီနေရာရဖို့ သေနတ်ခါးကြားထိုးပီးတက်လာခဲ့တာမဟုတ်တဲ့အတွက်သူ့ မှာ ခေါင်းဆောင်အရည်အသွေးရှိတာကျိန်းသေပါတယ်။
စကားမစပ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေက ဘားမားတူဒေးသတင်းမှာထင်တယ်ဖတ်ခဲ့ရတယ်။ မြန်မာဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွှန့် လဲ ဂျပန်ခရီးမှာ စစက္ကူ စုတ်နဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေက ပစ်ပေါက်တာ မှန်အလုံပိတ်ထားတဲ့ကားထဲကနေ ရာဇအိနြေ္ဒပျက်စွာ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ကားခြေနင်းဆီခေါင်းငုတ်ပုန်းခဲ့ရဖူးတယ်။
ကွာခြားချက်ကတော့ အဲဒိတုန်းက ပေါက်တဲ့သူကလဲ မြန်မာတွေပါပဲ။ရှောင်ရတဲ့ လူကလဲမြန်မာပါပဲ။ ဘုရ်ှလို လူမျိုးခြားကလူကြားထဲမှာ အကာအကွယ်မဲ့ လူပုံအလယ် အပေါက်ခံရတာမဟုတ်ပါ။ ဘုရှ် အပေါက်ခံရတဲ့ ဗွီဒီယိုကြည့်ရတော့ အိနြေ္ဒမပျက်သလိုပဲလို့မောင်ရင်လေး ပြောမိရင် လဲ ပြည်ပအားကိုးပိန်တာရိုး ၊ အဆိုးမြင်ဝါဒီကလေးဖြစ်ရ ဦးမယ်ထင်ရဲ့ ။အင်း...ခုတော့လဲ ဟိုဝန်ကြီးချုပ်ကြီးလဲ....
Yes...i agree with ko M.Y :)
Thanks, Ko Paw, for the post. I agree with what Ko Maung Yin said.
အနော်လည်း ကပေါတို့ ကမောင်ရင်တို့ ပြောတာကို သဘောတူတယ်ဆိုရင် အဆိုးမြင်ဝါဒီ ဖြစ်သွားမှာလားဟင်။
အမည်မသိ...... သားသားလည်း တိဝူးဗျ။
ကမောင်ရင်.... သေချာတာပေါ့ ကမောင်ရင်။ ဘုရ်ှက ပထမ တချက်ရှောင်ပြီးတော့ ခေါင်းပြန်ထောင်လာတော့တောင် မျက်နှာက ပြုံးစေ့စေ့နဲ့။ ဒေါသမထွက်ပဲ ရယ်ချင်နေပုံတောင် ရတယ်။ ဗိုလ်ခင်ညွှန့်အကောင်းစားကလေးမှာတော့ စိန်ရတုပွဲတုန်းက သန်းဖေလေးက ပြက်လုံးထုတ်တာကိုတောင် အနာကြီးနာပြီး ရှေ့ဆုံးခုံတန်းမှာ ထိုင်နေရက ထထွက်သွားလောက်အောင် ရာဂအိနြေ္ဒ....အဲလေ ရာဇအိနြေ္ဒ ပျက်ယွင်းရှာလေတယ်။ စိတ်နုတာပေါ့ဗျာ။ စိတ်နုတာပေါ့။
အမည်မသိ....မှ စလုံး....ပန်ဒိုရာ....အားလုံကွန်မင့်များအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော်လည်း ကမောင်ရင်နဲ့ တသဘောတည်းပါ။
for ALL engineers said...
လွယ်သလား၊ ခက်သလားရာမ . . . ဗိုလ်လုပ်ချင်တဲ့ကောင်ဆိုတာ တပ်ထဲဝင်ရတယ်ကွ !